Tranga tany Ambalavao :: Taksiborosy nahatrarana taolam-patin-jazakely • AoRaha
Tranga tany Ambalavao Taksiborosy nahatrarana taolam-patin-jazakely
Nahitana taolam-patin-jazakely iray ny fiara taksiborosy nandalo tany Ambalavao Tsienimparihy, omaly antoandro. Tsy mbola fantatra mazava ny mombamomba an’io razana io sy ny olona nitondra azy, hatramin’ny omaly hariva. Efa eo am-panaovana ny fanadihadiana rehetra ny polisy any an-toerana. «Tsy misy banga ny taolana tamin’ny razana. Mbola misy volo ny lohany », hoy ny polisy nanao fizahana ny zava-niseho.
Nandalo teo amin’ny sakana misy polisy ny taksiborosy iray avy any Ihosy nikasa ho any Fianarantsoa. Nisava ny tao amin’ny fitoeran’entana tao afaran’ny fiara ny mpitandro ny filaminana. Nosokafana ny kitapo babena iray ka nahitana taolam-balo. Nanontaniana avy hatrany ny mpandeha sy ny mpamily. Nofantarina izay mety ho tompon’ilay kitapo.
«Nisy taratasy vitsivitsy tao anaty kitapo milaza fa zaza teraka tamin’ny taona 2015 ary maty tamin’ny 2017 io taolam-balo io. Nokasaina hoentina any an-toeran-kafa izany, saingy izao noentina an-tsokosoko izao», hoy ihany ny mpitandro ny filaminana.
Nifanilika sy nilaza ho tsy mahafantatra momba an’ilay razana tao anaty kitapo ny mpandeha rehetra. Mampiahiahy ny mpanao famotorana ny mpandeha roa ka notazonina hatao fanadihadiana. Nalefa nanohy ny diany kosa ny mpandeha ambiny. Voalaza fa nanakana ny fiara sy niakatra teny antenantenan-dalana ireo olona roa ireo. Tamin’ny fidirian’izy ireo tao anaty taksiborosy no nampisokatra farany ny fitoeran’entana tao afara.
Mitohy ny fanadihadiana momba an’izao razana noentina an-tsokosoko izao.
Lozam-pifamoivoizana :: Zaza, sivy volana, maty tamin’ny fivadihana fiara